China Double Shaft Shredder Ukwakha kunye Factory | Jiarui
I-Double Shaft Shredder ifunxa iteknoloji yasekhaya neyangaphandle; inoyilo olusengqiqweni kunye novavanyo oluphindaphindiweyo kwaye iqhubeka nokuphucula umatshini unezinto ezinje ngokusetyenziswa kwamandla asezantsi, umgangatho olungileyo.
I-shaft shredder yenziwe ngomatshini, isinciphisi somhlaba esinzima esinamazinyo, ishafti yokujikajika, imela yokuhambisa engeniswe ngaphandle, isitshixo esisigxina, isakhelo, isiseko somatshini, ibhokisi, iqonga lokusebenza kunye nolunye ulwakhiwo olukhulu.
Lo matshini wamkela ulawulo lwe-microcomputer (PC) oluzenzekelayo, kwaye unemisebenzi yokuqalisa, ukumisa, ukubuyisela umva kunye nokulayisha ngaphezulu ukulawula okuzenzekelayo. Inempawu zesantya esisezantsi, torque ephezulu kunye nengxolo ephantsi. Kufanelekile ukukrazula okukhulu kunye nobunzima bokuqhekeza izinto ezinje ngeTV, umatshini wokuhlamba impahla, iqokobhe lefriji, imibhobho ephakathi, izixhobo zombhobho, ifolokhwe yeforklift, itayara, ukupakisha umphanda, njl.
Inkcazo Kabini Iparameters zokutshiza
Ngama-45 + 45
Ngama-55 + 55
Ngama-75 + 75
Egqithileyo Umsebenzi onzima wokujija ingalo
Okulandelayo: Shredder & Crusher bonke-in-nye umatshini